जीवनका रंगहरु | Ratopati
जीवन रूपान्तरणको निमित्त स्वीकारभाव access_timeभदौ २१, २०७८
यो ब्रह्माण्ड नियममा छ, प्रवाहमा छ । पानी जहिले पनि भिरालोतिर बग्छ, गहिरो स्थानमा जम्मा हुन्छ । बादल सदा आकाशमा रहन्छ । बिरुवा जमिनमा रोपेपछि जहिले पनि माथितिर बढ्दै जान्छ । सूर्यचन्द्र उदाउने समय एउटै छ । पशुपन्छी पनि प्रकृतिले जे गर्न लगाएको छ, त्यही गर्छन् । मानिस मात्र...
आफूभित्रको ‘म’लाई चिनौँ access_timeभदौ १०, २०७८
साधारण बोलचालको भाषामा म भन्नेवित्तिकै शरीर, मन, पद, प्रतिष्ठा, कुल, वर्ण, जाति आदिलाई जनाउँछ । धनसम्पत्ति आदिले पनि व्यक्तिलाई जनाइरहेको हुन्छ । अहङ्कारलाई पनि हामी म ठान्छौँ । किनकि कुरा गर्दा म हुँ भन्छौँ । कसैले आफ्नो प्रशंसा गर्याे अनि हितमा कुरा गर्याे भने म खुसी ...
जानी राखौँ तालीका यी फाइदाहरू access_timeसाउन २६, २०७८
तालीबारे हामी सबैलाई के लाग्छ भने कसैको सफलता, असफलतामा उनीहरूलाई प्रोत्साहन वा सान्त्वना दिन मात्रै प्रयोग हुन्छ । तर विभिन्न अनुसन्धानहरूले तालीका थुप्रै फाइदा पत्ता लगाएका छन् । मानव शरीरमा थुप्रै नाडीहरू तथा रक्तनलीहरू फैलिएर रहेका हुन्छन् । विज्ञानका अनुसार मानव शर...
श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध विश्वासमा टिकेको हुन्छ, एकले अर्कालाई धोका नदिनुहोस् access_timeअसार २१, २०७८
कहानीः शास्त्रमा चंचुला र बिन्दुकको कहानी बताइएको छ । चंचुला र बिन्दुक दुबै श्रीमान् श्रीमती थिए । विवाह भएदेखि नै बिन्दुक चंचुलाको उपेक्षा गर्दथे र उनी अन्य स्त्रीमा रुची राख्दथे । बिन्दुक आचरणको हिसाबले निकै गिरिसकेका थिए । धेरै समयसम्म त चंचुलाले धैर्य राखिन्, श्री...
महिलाको खतना : ‘मेरो भयो तर छोरीहरुको हुन दिन्नँ’ access_timeअसार १४, २०७८
महिलाको खतना इजिप्टमा सन् २००८ मा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो तर अहिले पनि यो देशमा खतनाको मामिला संसारकै सबैभन्दा बढी छ । चेतावनीः यो लेखमा धेरैलाई विचलित गराउने जानकारी छ । रुढिवादी मुसलमानबीच महिलालाई त्यतिबेलासम्म ‘अशुद्ध’ र ‘विवाहका लाग...
काठमाडौँ नजिकैको उत्कृष्ट गन्तव्य: त्रिशूली रिभरसाइड रिसोर्ट access_timeबैशाख ५, २०७८
काठमाडौं । दैनिक एकनासको काम गरेर थकित हुनु भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ ? परिवार वा साथीभाइसँग कतै गएर रमाइलो गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? थोरै बजेट, छोटो समय र पर्याप्त रमाइलोका लागि कुनै रमणीय स्थानको खोजीमा हुनुहुन्छ भने धादिङको बेनीघाटस्थित त्रिशूली ...
कुनै जिनियसमा पाइने यी १४ लक्षण के तपाईंमा पनि छ ? access_timeचैत २४, २०७७
लूडविग भ्यान बिथोभेनले कहिल्यै गुणा–भाग गर्न सिकेनन् । पाब्लो पिकासो वर्णमाला जान्दैनथे, वाल्ट डिज्नी कक्षामा सुत्थे र भर्जिनिया वुल्फलाई त स्कूल प्रवेश गर्न नै रोक लगाइएको थियो जबकी उनका भाइ केम्ब्रिज जान्थे । चार्ल्स डार्विनको स्कूलमा हालत यति खराब हुन्थ्यो कि उनका पित...
प्रेरक कथाः सुख शान्ति चाहनुहुन्छ भने अरुको खराब पक्ष होइन, राम्रो पक्षमा ध्यान दिनहोस् access_timeफागुन ३, २०७७
पुरानो समयमा एक व्यक्ति आफ्ना छिमेकीहरुको सुख देखेर असाध्यै डाहा गर्दथे । उनले वरिपरिका सबैको कुरा काट्ने गर्दथे । अरुको कुरा काट्ने बानीका कारण उनी सधैं अशान्त रहन्थे । उनको यो बानीका कारण छिमेकी पनि उनीसँग राम्रोसँग कुरा गर्दैनथे । एकदिन उनी गाउँको मन्दिरमा गए...
जीवनमन्त्रः बच्चाको पालन पोषणमा अत्यधिक सावधानी अपनाउनुपर्छ, आमाबुवाले सन्तानलाई सही–गलतबीचको फरक पक्कै सम्झाउनुहोस् access_timeमाघ २७, २०७७
कहानीः हाभारतमा कन्ती आफ्ना पाँच पुत्रसँग वनमा बसिरहेकी थिइन् किनभने धृतराष्ट्र चाहँदैनथे कि पाण्डुका पुत्रले राज्य पाउन् । धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन अधर्मी थिए । उनले सधैं पाण्डव पुत्रलाई तनावमा पार्दथे । कुन्तीका श्रीमान् पाण्डुको श्रापका कारण मृत्यु भइसकेको थ...
शिष्टाचार जीवन मन्त्रः सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने खुसी हुनुहुन्छ र यही जीवन हो access_timeमाघ २१, २०७७
हाम्रो इच्छा आकांक्षा अनन्त छन् । त्यस्ता विभिन्न कुराहरु छन् जसलाई हामी पाउन चाहन्छौं । र मान्नुहोस् कि यदि कुनै पूरा भइहालेछ भने पनि त्योभन्दा थप राम्रो पाउने चाहना राख्छौं । आफ्ना सपना र इच्छा पक्कै पनि पूरा गर्नुहोस् तर यसका कारण जीवनलाई निराशातर्फ नलैजानुहोस् । जीवनम...
जीवन मन्त्रः हरेक कुरा विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन, केही कुरा भावनात्मक रुपमा पनि बुझ्नुहोस् access_timeपुस २८, २०७७
स्वामी विवेकानन्दका गुरु रामकृष्ण परमहंससँग देवी कालीको एउटा सानो मूर्ति थियो । उनी सबैलाई भन्थे, ‘यो मूर्तिमा पूरा ब्रह्मान्डको बास छ ।’ एकदिन यो कुरा केही विदेशीले सुन्दा उनीहरुले रामकृष्ण परमहंसलाई भने, ‘संसार यति ठूलो छ यृसको अगाडि ...
याद राख्नुुस्, यस्ता शब्दले दुख्नसक्छ तपाईंकी पत्नीको मन access_timeपुस २५, २०७७
विवाह एक अटूट बन्धन हो । यो जीवनभर साथ निभाउने सम्बन्ध हो । यसलाई बलियो बनाउनका लागि पति–पत्नी दुुबैको सहयोग जरुरी हुन्छ । यदि, कोही एकलाई सम्बन्धमा समस्या हो भने त्यसलाई लामो समय टिकाउन मुस्किल हुन्छ । वैवाहिक जीवनमा पति–पत्नीबीच सामान्य झगडा स्वभा...
अनुशासन, नियम, समर्पणः कुनै पनि काममा हामीलाई विज्ञ बनाउने तीन मन्त्र access_timeपुस २५, २०७७
महाभारतमा एकलव्यको कथाले हामीलाई अनुशासनको महत्व बुझाउँछ । एकदिन एकलव्य कौरव र पाण्डवका गुरु द्रोणाचार्य नजिकै पुगे र भने, ‘गुरुदेव म पनि धनुर्विद्या सिक्न चाहन्छु, कृपया मलाई पनि आफ्नो शिष्य बनाउनुहोस् ।’ द्रोणाचार्यले भने, ‘म राजकुमारलाई पनि धन...
यो तस्बिरमा सुरुमा तपाईंले जे देख्नुहुन्छ, त्यसले तपाईंको व्यक्तित्वबारे केही विशेष बताउँछ access_timeपुस १०, २०७७
यहाँ एउटा तस्बिर दिइएको छ जुन हेर्दा त सामान्य नै देखिन्छ तर यसका थुप्रै अर्थ छन् । तपाईंले यो तस्बिर हेरेपछि एउटै कुरालाई मात्रै ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यो तस्बिर हेर्दा तपाईंले सबैभन्दा पहिला के देख्नुभयो, त्यो कुरा याद गर्नुहोस् । यसले तपाईंबारे विशेष कुरा बत...
२०२१ मा यी पाँच तरिकाले हटाउनुहोस् पैसाको चिन्ता access_timeपुस ७, २०७७
जब अमान्डा क्लेम्यान न्यूयोर्कमा थिइन् तब क्रेडिट कार्डको ऋणमा यति नराम्रोसँग फसिसकेकी थिइन् कि त्यसबाट बाहिर कसरी आउने, उनले सोच्नसमेत सकेकी थिइन्न । अमेरिकामा फाइनेन्सियल थेरेपिस्ट अमान्डाले बीबीसी मुन्डोसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘त्यो स्थितीले मलाई यति लज्ज...
किन केही मानिसहरू साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् ? access_timeमंसिर १, २०७७
तपाईंलाई सोच्न बाध्य तुल्याउने ओशोका ७ अभिव्यक्ति access_timeअसोज १९, २०७७
सन् १९३१ मा भारतको भोपालमा जन्मिएका चन्द्र मोहन जैन, जसलाई हामी आचार्य रजनिश वा ओशो भनेर चिन्छौँ, उनी प्रेम, अध्यात्म र मानव विकासबारेका आफ्ना दर्शनका कारण चर्चित छन् । ५८ वर्षको उमेरमा निधन हुनअघि उनले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय प्रवचनमै बिताए । भारतबाट अमेरिका गएपछ...
वातावरणमा कोरोनाभाइरसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? access_timeचैत १६, २०७६
मार्था हेनरिक्स । बीबीसी केही महिनामै संसार बदलिएको छ । हजारौँले ज्यान गुमाए, सयौँ हजार कोभिड–१९ का बिरामी छन् । डिसेम्बर २०१९ मा उहान सहरमा देखिनुअघि कोभिडबारे कसैलाई थाहा थिएन । ती दशौँ लाख जो सङ्क्रमित छैनन्, आज उनीहरुको जीवन पनि पूर्णतया बदलिएको...
अफिसमा काम वा घरमै बसेर गरिने काम : कुन बढी प्रभावकारी ? access_timeचैत १३, २०७६
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण यतिबेला देश ‘लकडाउन’मा छ । नेपालमात्रै होइन विश्वका कयौँ देशहरुमा समेत अहिले मानिसहरुलाई घर बाहिर जान दिइएको छैन । घरबाहिर निस्कन नसक्दा अहिले कतिपय व्यवसाय बन्द छन् । कतिपय आंशिक रुपमा म...
के मृत्यु भनेको पात खसेको जस्तै मात्रै हो त ? access_timeमंसिर ३०, २०७६
जीवन र मृत्युको बारेमा अनेकौं अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् । पौराणिक कालदेखि नै मानिसहरुले, अझ भनौं पुराणहरुमा वर्णित कथाहरुअनुसार त त्यसकालमै मानिसहरुले मृत्युमामथि विजय पाउने चाहना राख्दै आएको र त्यसको लागि उपायहरुको खोजी गर्दै आएको पाइन्छ । तर अहिलेसम्मको शाश्वत सत्...
ती महिला जसको जिन्दगी विवाहको पहिलो रातले बर्बाद गरिदियो access_timeकात्तिक २०, २०७६
हेवर हसन।बीबीसी विवाहबारे संसारभरिका मानिसहरूबीच निकै उत्सुकता हुने गर्छ । तर संसारका केही भागमा विवाहसँग सम्बन्धित केही रीतिरिवाजले धेरैलाई शारीरिक र मानिसक पीडा खेप्न बाध्य बनाएको हुन्छ । उनीहरूको विवाहको पहिलो रात यसरी बित्छ कि जसका तिता यादले जीवन रहुञ्ज...